IFTIINKACUSUB.COM: Ninkii Buuhoodle ku dilay marxuum C/Raxiim Rabiish oo maanta la toogtay.
Ninkii Buuhoodle ku dilay marxuum C/Raxiim Rabiish oo maanta la toogtay.
Waxa maanta Qisaas ah lagu Fuliyey degmada Buuhoodle, Maxamed Saalax Xaaji Dayib,oo ahaa ninkii sida badheedhka ah u Tooriyeeyey shalay oo ay bishu ahayd 6/5/2017 Allah ha u naxariistee marxuum C/rixiin Saleebaan (Rabiish) oo Toorey uu ku Dhuftay.
Kadib ehelada Marxuumkii shalay geeriyooday ayaa go’aansaday in loo qisaaso ninka dilay wiilkoodii ,taasi oo ay la ogoladeen dhankooda dhinacii kale ee gacan ku dhiiglahu uu kasoo jeeday.
Ilahay oo awamiirtiisa la fuliya waxa ay kala bogsiinaysaa in ay cudur iyo dhibaato isu qaadaan dadka walalaha ahi.waana mida keentay in qofkii qof kale si badheedh ah u dila in loo dilo sharciga islaamkana la mariyo.